I-Wholesele yePlastiki faucet X8411 uMvelisi kunye noMboneleli | Xushi
Inombolo yomzekelo: X8411
Izinto zoMzimba: Iplastiki
Uhlobo loFakelo:Idekhi inyuswe
Isixhobo seValve Core:ABS
Igama:iplastiki ye-ABS ivula itephu ecothayo
Material:ABS okanye PP
Uvavanyo: Uvavanyo lokuvuza kwe-100%.
Phakathi:Ulwelo lobushushu obuqhelekileyo
Ukusetyenziswa: umbhobho weplastiki
Isicelo: Ukunkcenkceshela iigadi, ezolimo, izitiya, ishishini, njl.
ABS okanye PP
UkuKhanya okuNgqongileyo ixesha elide
amanzi ulwelo oludlekayo
Ukunkcenkceshela kwezolimo iGarden Construction Ishishini lemichiza yePetroleum ETC.
Izinto eziluncedo kwiimpompo zeplastiki eziveliswe yiXushi Plastic Industry:
Itephu yeplastiki ineempawu ezintle zeekhemikhali kunye neempawu zokugquma zeplastiki. Itephu yeplastiki inokumelana nobushushu obuphezulu kwaye akukho lula ukuyikrwempa. Ngokukodwa iifauce zeplastiki kwimarike zenziwe ngeplastiki ye-ABS. Iplastiki ye-ABS yimathiriyeli entsha engeyotyhefu kwaye ayinancasa, ineempawu ezibalaseleyo zekhemikhali kunye neempawu zokugquma umbane. Igxininisa kwiimpawu ezahlukeneyo ze-ps, san, kunye ne-bs. , Ineempawu ezibalaseleyo zoomatshini ezifana nokuqina, ukuqina kunye nokuqina.
Itephu yePlastiki inempembelelo entle yokuchasa ukusebenza, uzinzo olululo lwangaphandle, akukho deformation, ubunzima obulula, akukho mdaka, akukho mhlwa, ukungonwabi, okuncinci, kunye nolwakhiwo olulula. Yimveliso yefaucet ehambelana nokusingqongileyo kunye nempilo.
3. ukuxhathisa kakuhle kokubola
4. Izimbo ezahlukahlukeneyo
Ubume obuphuculweyo bombhobho weplastiki ikakhulu ngumzimba wevalvu kunye nokutshintsha okwenziwe ngombala ofanayo. Ubuncinci omnye womzimba wevalvu okanye iswitshi inesakhiwo sebhloko yokuhombisa. Umbala wendandatho yokuhlobisa kunye nebhloko yokuhlobisa ihluke kulowo womzimba wevalve kunye nokutshintsha. Ulwakhiwo lokuhombisa lwenza ukuba itephu yeplastiki entsha isebenze kwaye ibe ntle, ityebisa kakhulu isitayile setephu, kwaye ihlangabezana neemfuno zabantu banamhlanje.Ngokweendlela zompompo weplastiki, kukho: itephu emhlophe, itephu engwevu, itephu ebomvu, ibcock eluhlaza, ibibcock etyheli;Iiitepu zeplastiki zahlulwa ngokobukhulu:i-1/2 intshi yefaucet,i-20mm i-intshi, i-intshi eyi-3/4, i-25mm, i-intshi eyi-16;Iifauce zeplastiki zahlulwa ngokwemisebenzi yazo: ,itempe yegumbi lokuhlambela,itephu yokunkcenkceshela,ibibcock yezolimo,ibibcock yamashishini,igadi yegadi,itanki yetanki,itoliet ibibcock,ishower bibcock,ihigh pressure bibcock,isinxibelelanisi isiqhagamshelo, itephu esobala.
Ngaphambili: I-Bibcock eNqolileyo (i-Rhombus Handle) X8211
Okulandelayo: Ukunkcenkceshela kwezolimo Double Union Ball Valve X9211-S umbala omthubi
Itephu yomatshini wokuhlamba weplastiki enekhonkco ...